Gaariga Uzungol Cable | RayHaber | raillynews
Madaxweyne Gümrükçüoğlu, ayaa sharraxay. Wuxuu shaaca ka qaaday in mashruuca xarig-ka-wadista ee magaalada Uzungol uu bilaabmayo usbuuca soo socda. Kulamada Golaha Magaalaga Trabzon ee Dawlada Hoose ee Magaalada Nofeembar maanta, Duqa Magaalada Orhan Fevzi Kastamyada uu hogaaminayo Duqa Magaalada ayaa bilaabay. Madaxweynaha Kastamka [More ...]
Mashruuca Dib-u-dhiska ee Uzungöl
Şükrü Fettahoğlu, oo ganacsade ah ayaa heshiis la galay Teleferik Holding sanadkii hore, wuxuu u baxay inuu siiyo Uzungöl, oo ah xarunta dalxiiska ee ugu caansan Trabzon iyo gobolka, si uu u helo mashruuca jid-gooyo ee ugu horreeya. [More ...]
Qodistii ugu horreysay ee mashruuca xariga xarig ee Uzungöl waxaa la dili doonaa bisha Maajo: Xariga ayaa u shaqeynaya Uzungöl, jannada dalxiiska ee Trabzon, ayaa hadda socda. Qodista ugu horeysa ee Uzungol waxaa ladilayaa bisha May. Mid ka mid ah gobollada ugu caansan dalxiiska carabta ee Trabzon waa Uzungol [More ...]
Qodobka ugu horreeya ee mashruuca baabuurta ee Uzungöl ayaa la toogan doonaa bisha May
Qodistii ugu horreysay ee mashruuca gawaarida 'Uzungöl cable cable' waxaa la furi doonaa bisha May: Beerta Trabzon ee dalxiiska ee Uzungöl waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo shaqooyinka xargaha. Qodista ugu horeysa ee Uzungol waxaa ladilayaa bisha May. Waxaa loo qorsheeyay in loo sameeyo Uzungol oo ka mid ah gobollada ugu caansan dalxiiska carabta ee Trabzon. [More ...]
Dhismaha Isgaarsiinta Telefoonku wuxuu ku yaallaa Uzungol
Uzungöl'de Ropeway Construction oo bilawday: Trabzon iyo ganacsade turizmci Uzungöl'de, mid ka mid ah dalal Turkey ee ugu caansan dalxiis safka gaaray dhismaha Ropeway Project, kaas oo la qaban doonaa by Shukri Fettahoğlu. Fettahoglu, dhismaha Abriil [More ...]
Heshiiska qadka Telefoonada ee Uzungöl Signed
Qandaraaska Qandaraaska Gaarka ah ee Cusungöl Cable Carwich ayaa la Saxiixay: Uzungöl, oo hodan ku ah xayawaanka duurjoogta ah, ayaa leh noocyo kala duwan oo hodan ah, qurxinta muuqaalka muuqaalka u gaarka ah ee loogu talagalay booqdayaasha xilli kasta, natiijada dhul-gariir. [More ...]
Qaabka jilibka ee baabuurta telefanka ee Uzungöl si loo isticmaalo
Moodada ugu wanaagsan ee loo maro xadka Uzungöl: Qodistii ugu horeysay ee xariga wadada la qorsheeyay in laga sameeyo inta udhaxeysa Uzungöl iyo Garester plateau ee degmada Çaykara ee Trabzon ayaa la soo warinayaa in la duqeyn doono maalmaha soo socda. Duqa Gobolka Uzungol Abdullah [More ...]
Mashruuca Udungöl ayaa mustaqbalka keenaya mustaqbalka dalxiiska
Ropeway Project Uzungöl'de Town Dalxiiska ayaa la keeni doonaa foodda ah: Mashruuca baabuur cable ee magaalada inta badan xarumaha Uzungol Turkey ee dalxiiska muhiim ah oo Trabzon ee Çaykara ayaa la filayaa inuu kordhiyo tirada dalxiisayaasha. Ganacsade ka socda Trabzon [More ...]
dalxiiska Uzungöl'de Ropeway Project Iyada oo u iman doonaan inay foodda ah: mashruuca baabuur cable magaalada ugu xarumaha Uzungol Turkey ee dalxiiska muhiim ah oo Trabzon ee Çaykara ayaa la filayaa inuu kordhiyo tirada dalxiisayaasha. Ganacsade ka socda Trabzon Sukru [More ...]
Mashruuca baabuur cable ayaa waxaa Uzungöl'de Dhammaaday aroosadda, wiishashka ski waaweyn Turkey ee magaalada Trabzon, mashruuca Uzungol Çaykara gaadhay dhamaadka xarumaha dalxiiska ee. 12 inta udhaxeysa Uzungöl iyo Garester Plateau oo qiimahiisu yahay € million [More ...]
Ololaha baabuurta ee Uzungöl iyo Sümelaya Cable
Uzungöl iyo Sümelaya Teleferik abaabulka Dubaili ganacsade Necdet Kerem, oo maalgalin dhan 20 milyan oo doolar ku samayn doona Trabzon, ayaa booqday Badhasaabka Recep Kızılcık. Mashruuca gawaarida gawaarida ee Uzungöl iyo Sümela [More ...]